“ဒီကနေ့ရဲ့ မွေးနေ့ရှင် ချစ်ရသူ ခင်ပွန်း အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးကို မေတ္တာများအပြည့် နဲ့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးခဲ့တဲ့ အမွန်း” – Cele Oscar
Cele Active World ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် အမွန်းကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ အမွန်းကတော့ အမြဲ ဖက်ရှင်ကျပြီး အသံကောင်းသူ အဆိုတော်မလေး တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။မကြာသေးမှီကမှ ချစ်ရသူနဲ့ ရိုးရာအတိုင်း မင်္ဂလာဆောင်ကာ ရွှေလက်တွဲခဲ့သူ အမွန်းကတော့ သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို လူမျိုးမတူပေမယ့် တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦးနားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ချစ်ခင်စွာ ထူထောင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ ချစ်ရသူ ရှိကြောင်းကို (၂၀၂၀)ခုနှစ်ရဲ့ အစမှာ ချပြခဲ့ပြီးနောက် စေ့စပ်ကာ (၂၀၂၀)ခုနှစ်ရဲ့ အဆုံးမှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာပါ.။
လိုက်ဖက်ကာ နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်ကြင်နာမှုတွေကို ရရှိပိုင်ဆိ်ုင်ထားသူ အမွန်းကတော့ ပျော်ရွှင်ရဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အသေချာပါပဲနော်.။ ဒီနေ့မှာ တော့ အမွန်းက ချစ်ရသူ ခင်ပွန်းရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးကို “Happy birthday to my amazing husband. You mean the world to me!” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။
မင်္ဂလာဆောင် Wedding ပုံရိပ်များနဲ့ ချစ်ခင်ပွန်းအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..ပရိသတ်ကြီး.။ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ Cele Active World ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိ်ုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။
Source: Ah Moon’s Facebook
Cele Active World ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော အမှနျးကိုတော့ အထူးအထှေ မိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ.။ အမှနျးကတော့ အမွဲ ဖကျရှငျကပြွီး အသံကောငျးသူ အဆိုတျောမလေး တဈဦးပဲဖွဈပါတယျနျော.။မကွာသေးမှီကမှ ခဈြရသူနဲ့ ရိုးရာအတိုငျး မင်ျဂလာဆောငျကာ ရှလေကျတှဲခဲ့သူ အမှနျးကတော့ သူမရဲ့ အိမျထောငျရေးလေးကို လူမြိုးမတူပမေယျ့ တဈဦးအပျေါ တဈဦးနားလညျမှုအပွညျ့နဲ့ ခဈြခငျစှာ ထူထောငျခဲ့သူပဲဖွဈပါတယျနျော.။ ခဈြရသူ ရှိကွောငျးကို (၂၀၂၀)ခုနှဈရဲ့ အစမှာ ခပြွခဲ့ပွီးနောကျ စစေ့ပျကာ (၂၀၂၀)ခုနှဈရဲ့ အဆုံးမှာ လကျထပျခဲ့ကွတာပါ.။
လိုကျဖကျကာ နားလညျမှုအပွညျ့နဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူရဲ့ ဂရုစိုကျကွငျနာမှုတှကေို ရရှိပိုငျဆျိုငျထားသူ အမှနျးကတော့ ပြျောရှငျရဆုံး အမြိုးသမီးတဈယောကျဖွဈမယျဆိုတာ အသခြောပါပဲနျော.။ ဒီနမှေ့ာ တော့ အမှနျးက ခဈြရသူ ခငျပှနျးရဲ့ မှေးနအေ့တှကျ မှေးနဆေု့တောငျးလေးကို “Happy birthday to my amazing husband. You mean the world to me!” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။
မင်ျဂလာဆောငျ Wedding ပုံရိပျမြားနဲ့ ခဈြခငျပှနျးအတှကျ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတောငျးပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော..ပရိသတျကွီး.။ဖတျရှု့ပေးခဲ့ကွတဲ့ Cele Active World ပရိသတျကွီးလညျး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆျိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ.။